သွေးတိုးသေချာလျှင် မမေ့သင့်သည့် သပြေရွက် - UpdateNew
သွေးတိုးသေချာလျှင် မမေ့သင့်သည့် သပြေရွက်
May 22, 2020 UpdateNew ကျမ္မာရေးနှင့်ဆိုင်ရာ 0
ဆေးမတိုး သည့် သွေးတိုး အတွက် စိတ်အေး ရသည့် အောင်သပြေရွက်
မြန်မာပြည်သားတိုင်းသိကြသောပန်းအမည်ခံအရွက် ကအောင်သပြေပင်ဖြစ်သည်။ ကောင်းသောနိမိတ်ကို ယူကြသည့်။အောင်သပြေသည် မြန်မာတို့၏ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှု ပူဇော်ပွဲလမ်းသဘင်များတွင် မပါမရှိသော ဇာတ်လိုက်ပန်းပင်လည်းဖြစ်သည်။
ဝိဇ္ဇာဓရပညာရပ်တွင် သပြေ(၆+၅)=၁၁ (၁၁)မီးငြိမ်းရာက သပြေ၏ရှေ့တွင် တနင်္ဂနွေ အောင်(၁)ကို ထည့်ပေါင်းခြင်း ဖြင့် (အောင်သပြေ)သည်ဂဏန်း ပေါင်းခြင်း(၁၂)ကိုရပြန် သည်။ထိုနိမိတ်မှာ (၁၂)ရာသီ အောင်မြင်သောပန်း၊ အောင် နိမိတ်အောင်ဟိတ်ကို ရစေသောပန်းဟု မှတ်သားဖူးသည်။
တင်ပြလိုသည်မှာ သွေးတိုးရောဂါသည် ဆေးသောက်နေစဉ် သက်သာသလိုရှိသော်လည်းမကြာခဏသွေးပြန်တိုးတတ် ပါသည်။ ထိုကြောင့်ဆရာဝန်များက သွေးတိုးသည် လုံးလုံးလျားလျားမပျောက်နိုင်ကြောင်း၊ဆေးကိုပုံမှန်သောက်ဖို့လိုကြောင်း ညွှန်ကြားကြသည်ချည်းသာ။
သို့သော် အင်္ဂလိပ်သွေးတိုးကျဆေးများသောက်ပြီး သွေးပေါင် ကျသွားပြီးတိုင်း လူခန္ဓာနုံးချိပြီး ခံစား ကျန်ရစ် ရတတ်ပြန် သည်။ကြာလျှင်မလွယ်လောက်ဟုလည်းထင်မိသည်။
သွေးပေါင်းတက်၍ ခေါင်းမူးခြင်း၊ခေါင်းအုံ၍လေး လံထိုင်းမှိုင်းဖြစ်နေပါက အောင်သပြေအညွန့်မှ အောင်သပြေရွက်နုလေး(၅)ရွက် လောက် အားဝါးစားပြီး မြိုချလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
မကြာခင်သွေးပေါင်းကျ၍ ခေါင်းမူး၊ခေါင်းကိုက်၊ ခေါင်းအု့၊လေးလံထိုင်းမှိုငးခြင်းများ ယူပစ်သလို ပျောက်ကင်းသွားပါလိမ့်မည်။ သွေးပေါင်ချိန်စက်က အဖြေတစ်ခုပေးပါလိမ့်မည်။
လွယ်ကူစွာ သွေးတိုးဝေဒနာရှင်များ စမ်းသပ်လုပ်ကိုင်ကြည့် ပါ ။အပန်းမကြီးလှသောကြောင့်် အောင်သပြေရွက်သွေးတိုး အတွက် ဟုသာဆိုရပါတော့မည်။
သှေးတိုးသခြောလြှငျ မမသေ့ငျ့သညျ့ သပွရှေကျ
ဆေးမတိုး သညျ့ သှေးတိုး အတှကျ စိတျအေး ရသညျ့ အောငျသပွရှေကျ
မွနျမာပွညျသားတိုငျးသိကွသောပနျးအမညျခံအရှကျ ကအောငျသပွပေငျဖွဈသညျ။ ကောငျးသောနိမိတျကို ယူကွသညျ့။အောငျသပွသေညျ မွနျမာတို့၏ ကိုးကှယျယုံကွညျမှု ပူဇျောပှဲလမျးသဘငျမြားတှငျ မပါမရှိသော ဇာတျလိုကျပနျးပငျလညျးဖွဈသညျ။
ဝိဇ်ဇာဓရပညာရပျတှငျ သပွေ(၆+၅)=၁၁ (၁၁)မီးငွိမျးရာက သပွေ၏ရှတှေ့ငျ တနင်ျဂနှေ အောငျ(၁)ကို ထညျ့ပေါငျးခွငျး ဖွငျ့ (အောငျသပွေ)သညျဂဏနျး ပေါငျးခွငျး(၁၂)ကိုရပွနျ သညျ။ထိုနိမိတျမှာ (၁၂)ရာသီ အောငျမွငျသောပနျး၊ အောငျ နိမိတျအောငျဟိတျကို ရစသေောပနျးဟု မှတျသားဖူးသညျ။
တငျပွလိုသညျမှာ သှေးတိုးရောဂါသညျ ဆေးသောကျနစေဉျ သကျသာသလိုရှိသျောလညျးမကွာခဏသှေးပွနျတိုးတတျ ပါသညျ။ ထိုကွောငျ့ဆရာဝနျမြားက သှေးတိုးသညျ လုံးလုံးလြားလြားမပြောကျနိုငျကွောငျး၊ဆေးကိုပုံမှနျသောကျဖို့လိုကွောငျး ညှနျကွားကွသညျခညျြးသာ။
သို့သျော အင်ျဂလိပျသှေးတိုးကဆြေးမြားသောကျပွီး သှေးပေါငျ ကသြှားပွီးတိုငျး လူခန်ဓာနုံးခြိပွီး ခံစား ကနျြရဈ ရတတျပွနျ သညျ။ကွာလြှငျမလှယျလောကျဟုလညျးထငျမိသညျ။
သှေးပေါငျးတကျ၍ ခေါငျးမူးခွငျး၊ခေါငျးအုံ၍လေး လံထိုငျးမှိုငျးဖွဈနပေါက အောငျသပွအေညှနျ့မှ အောငျသပွရှေကျနုလေး(၅)ရှကျ လောကျ အားဝါးစားပွီး မွိုခလြိုကျခွငျးဖွဈပါသညျ။
မကွာခငျသှေးပေါငျးကြ၍ ခေါငျးမူး၊ခေါငျးကိုကျ၊ ခေါငျးအု့၊လေးလံထိုငျးမှိုငးခွငျးမြား ယူပဈသလို ပြောကျကငျးသှားပါလိမျ့မညျ။ သှေးပေါငျခြိနျစကျက အဖွတေဈခုပေးပါလိမျ့မညျ။
လှယျကူစှာ သှေးတိုးဝဒေနာရှငျမြား စမျးသပျလုပျကိုငျကွညျ့ ပါ ။အပနျးမကွီးလှသောကွောငျ့ အောငျသပွရှေကျသှေးတိုး အတှကျ ဟုသာဆိုရပါတော့မညျ။
တစ်သောင်းတန်အုပ်တွေမှာ တစ်ထောင်တန်တွေ အစားထိုးထည့်ပြီး သိန်း၅၀၀၀ နီးပါး အလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့တဲ့ ဘဏ်ဝန်ထမ်းကို ဖမ်း
(၈)လအရွယ် ခလေးငယ်ကို ဖခင်ဖြစ်သူမှ ရေနစ်သတ်မှုဖြစ်ပွား
UPDATENEW provide celebrity, life style,breaking news, local news and International news.Articles are displayed in tex,video and photos.Vistors can read news in articles type of categories in https://updatenew.net/ (example - News, Entertainment,Sport, Health, Celebrity, Media &Music ...etc). Hope our vistors enjoy our website.
အသက်မပြည့်သေးဘဲ ပြည့်တန်ဆာလောကထဲ ရောက်သွားရတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မေလ (၂၇) ရက်နေ့ အတွက် မိုးလေဝသအခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်
အွန်လိုင်းကနေ ပုရစ်ကြော် ၀ယ်စားကြသူများ သတိထားကြပါ
ယခု လာမယ့် ၂၀၂၀ ဇွန်လတွင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ နေကြတ်ခြင်းနှင့် လကြတ်ခြင်း ကို မြင်တွေ့ရမယ့် နေ့ရက်များ